Dalada SSE oo Soo Saartay Baaq Ku Wajawan Diiwaan-gelinta Codbixiyaasha Somaliland |
Dalada SSE oo Soo Saartay Baaq Ku Wajawan Diiwaan-gelinta Codbixiyaasha Somaliland
Dallada SSE waxay diiwaangelinta codbixiyayaasha u aragtaa waajib ina saarnaa oo hadda fulintiisii lagu dhaqaaqay Dallada SSE oo ay ka bahoobeen ururada Somaliland ee Yurub waxa ay baaqan kooban ku muujinayaan dareenka togan ee ka dhashay fulinta hawsha diiwaangelinta codbixiyayaasha. Waynu ognahay in doorashooyinkii hore ay inoo suurtoobi weyday inaynu ku galno diiwaan gelin sugan. Waa Ilaahay mahadii in hadda Somaliland ay ka bilaabantay diiwaangelintii si aynu doorashooyinka 2017(ka) ugu galno doorasho ku salaysan diiwaangelin rasmiya. Mahadcelin Ugu horreyn guddiga iyo dhammaan xubnaha Dalladu waxay mahad balaadhan u soo gudbinayaan dhammaan cid kasta oo gacan ka gaysatay fulinta iyo bilaabida hawshan diiwaangelinta oo ay ka mid yihiin Komishanka Doorashooyinka Qaranka, Saddexda Xisbi iyo dabcan Xukuumadda Somaliland iyo laamaheeda kale ee ay hawshan u adeegsanayso.
Mar labaadka Dalladu waxay mahad kal iyo laab ah u soo jeedinayaan dhammaan dadweynaha Gobbolka Togdheer iyo maamulkooda oo la yimid dhiiranaan iyo geesinimo u galeysa taariikhda Somaliland maadaama ay noqdeen Gobbolkii ugu horreeyay ee laga bilaabo diiwaangelinta cod bixiyayaasha. Waxa kale oo aanu idiinka mahadnaqaynaa sida hawlkarnimada leh ee aad ilaa hadda u wadaan hawsha. Dadweynaha reer Togdheer waxa aanu ku kalsoonahay inay nala dareensanyhiin muhimada iy faa’iidada ku jirta diiwaangelintan oo ay intii karaankooda ah suuragelin doonaan diiwaan gelinta dadweynaha reer Togdheer haddiii ay magaalo iyo haddii ay miyi tahayba.Waxaanu hubnaa inaad ku baraarugsantihiin inaad gudanaysaan waajib qaanuuniya isla markaana aanu Ilaahay idiinka baryayno inuu idiin sahlo.
Gobbolada kale ee Somaliland: Gobbolada kale ee Somaliland waxa aanu iyagana kula dardaarmaynaa inay u sii diyaar garoobaan fulinta barnaamijkan diiwaangelinta codbixiyayaasha. Waa hawl loo baahanyahay in la iska kaashado shicib iyo xukuumadba. Waa barnaamij aynu rajaynayno inuu sii adkeeyo nidaamka Dimuqraadiyadeed ee aynu qaadanay. Waa barnaamij karaamo iyo milgo u yeelaya haddii doorashooyinka soo socda aynu ku galno nidaamkan diiwaangelinta codbixiyayaasha. Dan iyo faa’iido ayaa inoogu jirta ee yaanay Gobboladu dhayalsan habsami fulinta hawshan diiwaangelinta. Dallada SSE waxay hubtaa in shicibka reer Somaliland ay ku baraarugsanyhiin qiimaha ay inoogu fadhido in waddankeena ay ka dhacdo doorasho xor iy xalaal ah oo ka duwan doorashooyinkii hore oo lahaa dhaliilahooda. Waynu ognahay qabashada doorashooyinku in aanay sahlanayn, waxayna wataan hawshooda iyo dhibaatooyinkooda. Si haddaba hawlaha iyo khilaafyada ka dhasha doorashooyinka loo yareeyo ayaa waxa lagama maarmaan inoo ah inaynu ku galno nidaamka diiwangelinta codbixiyayaasha.
Adresse : 13 rue Jean Monnet 64000 – Pau, France – Tel + 33 6 89 83 12 66, London Tel +44 7870 515 334 Web: http//www.sseuro.com, Email: ssediapora@gmail.com Dardaaran